projects - Synonyms of projects | Antonyms of projects | Definition of projects | Example of projects | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for projects
Top 30 analogous words or synonyms for projects
ရှိန်းကျိန့်မြို့ Shenzhen has some of the largest public projects in China. The International Trade Center (国贸), built in 1985, was the tallest building in China when built, and the Shun Hing building was also the tallest in Asia when it was built (still the tallest steel building in the world). Shenzhen is also the site for many tall building projects. Some of the supertalls that have been either proposed or approved are well over . Other proposed buildings would surpass the Kingkey 100's height by 2015.
အင်တာနက် USSR ၏ Sputnik ကို ဖွင့်လှစ်မှုသည် ၁၉၅၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် နည်းပညာ ဦးဆောင်မှုကို တဖန် ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အဆင့်မြင့် သုတေသန စီမံကိန်း အေဂျင်စီ (Advanced Research Projects Agency) (ARPA or DARPA)ကို တည်ထောင်ရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ARPA က Semi Automatic Ground Environment (SAGE) အစီအစဉ်၏ သုတေသနကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် Information Processing Technology Office (IPTO)ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရေဒါ စနစ်များကို အတူတကွ ကွန်ယက်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ IPTO ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ US စစ်တပ်၏ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်း နှင့်ပတ်သက်သော ၎င်းတို့၏ အလေးထားစရာကိစ္စကို ရင်ဆိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာရေးဖြစ်ပြီး ပထမဆင့်အနေနှင့် ပန်တဂွန်၊ ရှိုင်ယန်တောင်နှင့် SAC HQ တို့ရှိ ၎င်းတို့၏ ကွန်ပျူတာများ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ရန် ဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ် ၁၉၉၄ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၊ European Organization for Nuclear Research (CERN)မှ ထွက်ခွာအပြီးတွင် Tim Berners-Lee သည် World Wide Web Consortium (W3C) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို Massachusetts Institute of Technology ရှိ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ စမ်းသပ်ခန်း(MIT/LCS) တွင် အင်တာနက်ကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြုခဲ့သော Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) အထောက်အပံ့ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင် INRIA (ပြင်သစ် အမျိုးသား ကွန်ပျူတာ သုတေသန စမ်းသပ်ခန်း တစ်ခု)၌ ဥရောပ ကော်မရှင် DG InfSo အထောက်အပံ့နှင့် ဒုတိယ ဆိုဒ်ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကိုင်အို တက္ကသိုလ်တွင် တိုက်များနှင့်ဆိုင်သော တတိယဆိုဒ်ကိုလည်းကောင်း ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၄ခုနှစ်အကုန်တွင် လက်ရှိ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်သော် သေးငယ်နေသေးသော်လည်း သတိပြုမိထိုက်သော website အတော်များများမှာ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများစုမှာ ယနေ့ ခေတ်စားနေသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ သို့မဟုတ် လှုံ့ဆော်မှုများ ဖြစ်သည်။
ဂျင်မီဝေးလ်စ် From 1994 to 2000, Wales was the research director at Chicago Options Associates,afutures and options trading firm in Chicago. By "speculating on interest rate and foreign-currency fluctuations," he had soon earned enough to "support himself and his wife for the rest of their lives," according to Daniel Pink of "Wired". During this time, one of the projects Wales undertook was the creation of the web portal Bomis which featured user-generated webrings and that, according to "The Atlantic Monthly", "found itself positioned as the Playboy of the Internet." Foratime the company sold erotic photographs, and Wales described the site asa"guy-oriented search engine" withasimilar market to "Maxim". Questions have arisen about the nature of its content. Bomis did not become successful, but in March 2000 hosted and provided the initial funding for the Nupedia project.